Izindaba - "Isiphakamiso esisha" esinganakiwe sokuphepha kwebhethri yamandla
"Isiphakamiso esisha" esinganakiwe sokuphepha kwebhethri yamandla
Izingozi zomlilo eziqubuka njalo zezimoto zikagesi ziveze ezinye izinkinga ezintsha emkhakheni wamabhethri kagesi. Ngokwemibiko yabezindaba yalapha ekhaya, kwaqale kwaqondakala ukuthi le ngozi kwakuwumlilo webhethri, kwathi ngoJulayi kwaba nezingozi zomlilo zezimoto eziyi-14 ezingabalwa ezweni, kanti eziyi-12 zazo zinemininingwane yesikhathi nendawo ecacile.
Izingozi zomlilo zenzeka kaningi, ziveza izimo ezahlukahlukene zeminyaka edlule, okufanelekile ukunakwa embonini.
Ngokuya ngokuhlaziywa kwembangela yengozi yomlilo yakamuva yiNational New Energy Vehicle Accident Investigation Expert Group, kunezigaba ezimbili ikakhulukazi:
Isigaba esisodwa amaphutha wokuklama womkhiqizo osobala. Olunye uhlobo ukukhubazeka kokuklama okungewona umkhiqizo, okugxilwe kakhulu kumjikelezo omfushane wokuqinisekisa umkhiqizo, uhlelo lokuqinisekisa ukuphepha olungaphelele, ukulungiselelwa kwemingcele yokuphepha yomkhiqizo, inqubo yokusebenzisa nokushaja.
Ekulandeleni izingozi zomlilo, kunezizathu ezimbalwa nezimbalwa zokukhubazeka kokuklanywa komkhiqizo esigabeni sokuqala, nezizathu eziningi ngokwengeziwe esigabeni sesibili, ikakhulukazi izinkinga zenqubo ethile yokusetshenziswa, okuvame ukunganakwa.
Ukushaja ukuphepha nakho kuyisici esibalulekile sokulawula ukuphepha okusebenzayo.
Njengamanje, isilinganiso sezingozi ekushajeni siphezulu kakhulu. Ngokombono womshini, ukubaleka okushisayo kungenzeka kakhulu kwenzeke ngesikhathi sokushaja okusheshayo, ukukhokhisa okugcwele, noma ukukhokhisa ngokweqile, ikakhulukazi lapho inkinga yokuvela kwe-lithium ngesikhathi sokushaja ibangela ukubaleka okushisayo. Ngoba ukushaja akukhona nje kuphela ngamabhethri, kodwa futhi kuhlobene nezimoto, amashaja, neziteshi zokushaja. Eminyakeni embalwa ezayo, ukulawula ukushaja kuzokhula kancane kancane kube izimboni ezihlukanisiwe ukuheha ukunakwa.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuphepha kuwo wonke umjikelezo wempilo, okuyisisekelo sayo ukulinganisa okunembile kwesimo sempilo.
Abantu abaningi embonini, kufaka phakathi u-Ouyang Minggao, bakholelwa ukuthi ubuhlakani bokufakelwa, idatha enkulu, namapulatifomu amafu angeniswa ekuphepheni okusebenzayo ukwenza ngcono izinga lobuchwepheshe lokuphathwa kwebhethri, isexwayiso sebhethri kusenesikhathi, ukulawula ukushaja ibhethri, nokubikezela impilo yebhethri nokuhlola . Uma lokhu kusetshenziswe kahle, ukuphepha komjikelezo wempilo webhethri ephezulu ye-nickel ternary yebhethri engu-300Wh / Kg kulindeleke ukuthi ixazululwe kungakapheli iminyaka emibili.